2012 | သန်လျင်သား
အဲ့ဒါ တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်ပဲ
မိန်းခလေးတွေကို ဂစ်တာတစ်လက်လောက် မချစ်ဘူးဆိုတာ
ကျေးဇူးပြုပြီး ငါ့ကို မမုန်းနဲ့
ငါဒီနားမှာ ငြိမ်ငြိမ်လေး ...ရပ်နေမယ်..။
Posted by မိုးနင်း at 11:12 PM0comments
အဲ့ဒီနေ့က ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်က ထုံးစံအတိုင်းပဲ ဘတ်(စ်)ကားပေါ်မှာ အိပ်ရင်းနဲ့လိုက်လာတယ်။ ဘ၀ာ်(စ်)ကားကြီးကလည်း ထုံးစံအတိုင်းပဲ အိပဲ့၊ အိပဲ့ နဲ့ မောင်းလို့..။ ကျွန်တော်ဆင်းရမယ့် မှတ်တိုင်ရောက်ခါနီးတော့ မျက်လုံးပွတ်ပြီး ထလိုက်မှပဲ ကျွန်တော်နတ်ပြည်ရောက်နေမှန်းသိရတော့တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ဘေးမှာ အရမ်းလှတဲ့ နတ်သမီးလေးတစ်ပါး ထိုင်နေလို့ပဲ။သူမက အဖြူနဲ့ အပြာရောင် ထမီလေးကို ၀တ်ထားပြီး ဆံပင်လေးကို နောက်လှန်ပြီးစုစည်းထားတယ်။ မျက်နှာလေးကလည်း ဘာအကာရံမှမရှိ ရှင်းသန့်ဖွေးနုလို့။နှာတံလေးက စင်းပြီးတော့ မျက်တောင့်လေးတွေက မကော့တကော့လေးတွေ။ သူမလက်ထဲမှာတော့ ဖိုင်တွဲတစ်ခု။ ကျွန်တော်သိလိုက်တယ် ဒါဟာ မဟာ တန်းကပဲဆိုတာ။ ဘယ်မေဂျာလဲတော့ မသိလိုက်ဘူး။ မှတ်တိုင်ရောက်တော့ ၀ရုန်းသုန်းကားနဲ့ ပြေးဆင်းရတာကို။သူမ မျက်နှာလေးကိုတောင် အပြည့်မကြည့်လိုက်ရဘူး။ စပယ်ယာကို စိတ်ထဲမှာကျိန်ဆဲရင် ဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော်အတွက် နေ့ထူးနေ့မြတ်တစ်ပါးလို့ မှတ်ယူလိုက်မိတယ်။ သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်တွေ့ခွင့်ရတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော့်အတွက် သောကြာကြယ် နတ်သမီးရဲ့ အလင်းလက်ဆောင်ပဲ။ ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာ တိတ်တိတ်ကလေး ဆုတောင်းမိတယ်။ ကံကြမ္မာကြီးရယ် ကျွန်တော့် သူ့ကို နောက်ထပ်တွေ့ဆုံခွင့်လေး ဖန်တီးပေးပါဦးနော်။
ကျွန်တော်က ကျောင်းမှာမသွားတတ်မလာတတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အတော့်ကို နှံ့နှံ့စပ်စပ်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူတစ်ယောက်ကို ရှာဖို့ကျတော့ ကျောင်းကြီးက အရမ်းကို ကျယ်လွန်းနေတယ်။ ပြီးတော့ သူမက မဟာတန်းကဆို တော့ တွေ့ဖို့က အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ မဟာတန်းတွေက ကျောင်းတက်တာ နည်းတယ်လေ။ မေဂျာလည်းမသိ။ နာမည်လည်း မသိ။ နှစ်လည်း မသိဘူးဆိုတော့ စုန်းစုန်းမြုပ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်ပါတယ်။ သူမကို တွေ့တဲ့နေ့က အချိန်ကိုမှတ်ပြီးတော့ ကားဂိတ်မှာ တစ်ချိန်လုံးထိုင်စောင့်တယ်။ မတွေ့ပြန်ပါဘူး။ မေဂျာစုံက သူငယ်ချင်းတွေကို အကူညီတောင်းပြီး ရှာခိုင်းတယ်။ သတင်းအစနတောင်မရပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောတာလည်း အရမ်းကို တိကျတာကို။ ဆံပင်လေးက နောက်လှန်ပြီးစည်းထားတယ်။ အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့ ကျွန်တော်မသိတော့ဘူး။ အဖြူနဲ့အပြာဆိုတဲ့ယူနီဖောင်းက သူ့ရက်နဲ့သူဝတ်ရတာဆိုတော့ ကျန်တဲ့ရက်တွေဆို အပြင်ဝတ်စုံနဲ့ မှတ်မိဖို့မလွယ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ ဆံပင်ကလည်း နောက်လှန်ပြီးစည်းထားတာဆိုပေမယ့် ကျန်တဲ့နေ့တွေမှာ ချထားရင်ကော။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်က သူမကိုဘေးတိုက်လေးပဲ တွေ့လိုက်တာ။တကယ်တော့ ကျွန်တော့်အဖြစ်က အမှောင်ထဲမှာ အပ်ပေါက်ထဲကို အပ်ချည်ထည့် ရသလိုပါပဲ။ ရင်တွေမောလိုက်တာ။ တစ်ရက်တည်း တွေ့ရပေမယ့် တစ်သက်လုံးစွဲသွား တဲ့ အချစ်မျိုးနဲ့ သူ့မကို ကျွန်တော်ချစ်နေမိပြီထင်တယ်။
ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ ကံအကောင်းဆုံး နေ့ရက်တွေထဲက တစ်ရက်ဟာ ရောက်လာပြန်ပါတယ်။ ကျူရှင်ကို အမြဲနောက်ကျတဲ့ ကျွန်တော်က အဲ့ဒီနေ့ကမှ ထူးထူးခြားခြား ကျူရှင်ကို စောစောရောက်သွားတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကျူရှင်က ဆက်ရှင်တွေ ခွဲပြီးသင်တာဆိုတော့ ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့ ရှေ့အတန်းက မဆင်းသေးပါဘူး။ မနက်ပိုင်းအတန်းက (၁၂)နာရီဆင်း၊ ကျွန်တော်တို့ ညနေပိုင်း အတန်းက (123း0)တက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ အချိန်မှီမရောက်ပါဘူး အနည်းဆုံးစာသင်ချိန် တစ်ချိန်ကျော်လောက်မှာရောက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ ကျူရှင်ဆိုတာ သွားစရာမရှိမှလာရတဲ့နေရာလို ဖြစ်နေတယ်လေ။ ကျွန်တော်အခန်းထဲရောက်တော့ စာသင်နေတုန်းပါပဲ ကျွန်တော်လည်း ခပ်တည်တည်နဲ့နောက်ဆုံးခုံမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး စာအုပ်တစ်အုပ်ထုတ်လို့ ဟိုလှန်ဒီလှန်လုပ်နေလိုက်တယ်။ ဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့ ဒါဟာ ဂုဏ်ထူးတန်းဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ ဂုဏ်ထူးတန်းကျူရှင်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ ကျူရှင်တစ်ခုပဲ သင်တယ်။ ဂုဏ်ထူးတန်းကလည်း အားရစရာ ယောက်ျားလေးဆိုလို့ ကျွန်တော်ရယ်၊ နောက်တစ်ယောက်ရယ် ဒါပဲရှိတယ်။ အဲ့တစ်ယောက်ကလည်း မိန်းကလေးတွေနဲ့ထိုင်နေတော့ ဒီဘက်ခုံမှာက ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း။ ကောင်မလေးတွေက ကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်နဲ့ တချို့ဆို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကို လှည့်ကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်ထပြန်ချင်စိတ်ကို မနည်းအောင့်အီးထားရတယ်။ ဆရာမကို အားနာလို့သာ။ ဆရာမကလည်း ကျွန်တော်နဲ့ သိနေတယ်လေ။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပြန်ချင်စိတ်အကုန်လုံး ကို ရပ်တန့်စေမယ့် နတ်သမီးခေါင်းလောင်းထိုးသံလေးကိုကြားလိုက်ရတယ်။ ဒို၊ရေ၊မီ၊ဖာ တွေ ကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူး။ ဂီတအကြောင်းလည်း မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်က ကြားလိုက်ရတဲ့ သူမရဲ့အသံဟာ ညသန်းခေါင်ယံမှာ ကောင်းကင်ကထိုးလိုက်တဲ့ တယောသံလေးလိုပါပဲ ဆူညံမှုတွေကြားထဲက ကျွန်တော့် နားစည်ကို ကြည်လဲ့စွာ လာရိုက်ခတ်တယ်။ ကျွန်တော်ရင်ခုန်စွာနဲ့ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူမ..။ ကျွန်တော်ရဲ့ ဘယ်ဘက်နံရိုးလေးဟာ အဖြူရောင် ဂါဝန်ဒူးဖုံးလေးနဲ့ ဆောင်းနံနက်ခင်းရဲ့ နှင်းပွင့်လေးတစ်စက်လို့ ဖြူလွှဖွေးလက်လို့ ကျွန်တော်နှလုံးသားတစ်ခုလုံးကို ဆွဲယူသိမ်းပိုက်သွားတယ်။ သူမက ရူပဗေဒ မေဂျာကပဲ။ ဒါဆို ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူပဲပေါ့။ ကျွန်တော် အရမ်းပျော်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ အာကသကြီးတစ်ခု ၀င်ရောက်နေရာယူသွားသလို ဟာလာဟင်းလင်းကြီး။ ဒါဟာ ဘာဖြစ်တာပါလဲ။ ကျွန်တော်သိသွားတယ်။ ကျွန်တော်သူမကို ချစ်နေတာ သေချာပါပြီ။ တကယ့်ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ပါ။ ဘယ်အရာနဲ့မှ နိူင်းယှဉ်လို့မရတဲ့ ချစ်ခြင်းမျိုး ဆိုတာ ကျွန်တော် သိနေတယ်။ ဒါဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပထမဆုံး စသိတဲ့ အချိန်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ငြိမ်ပြီးတော့ စာအုပ်ကိုပဲ စူးစိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ သူမကို ပြန်မကြည့်ရဲပါဘူး။ သူမက ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့် ပြီး ဟိုဘက်အထဲခုံမှာ ၀င်ထိုင်ပါတယ်။ ခိုးကြည့်ရမယ့် အခွင့်ရေးလေးကတော့ ဆုံးရှုံးသွားရပြီ။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေက ခုနတုန်းနဲ့မတူ ခြားနားစွာ ရင်တွေခုန်ပြီ တစ်စုံတစ်ခုကို ရှက်နေတယ်။ပြီးတော့ ကျွန်တော်အရမ်းဝမ်းသာနေတယ်ဆိုတာပဲ။ကျွန်တော့် သူမကို ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ။ တခြားသူတွေ ရိပ်မိသွားလည်း စိုးရိမ်မိတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ မျက်လုံးလေးထောင့်ကပ်ပြီး ကျွန်တော့်ရဲ့ ဧ၀လေးကို လှမ်းကြည့်မိတယ်။ သူမက ဆရာမကို လှမ်းကြည့်လိုက်၊ စာအုပ်ကိုကြည့်လိုက်၊ တစ်ခါတလေ ဘောပင်ကို ပါးစပ်လေးနဲ့ကိုက်လိုက်၊ တစ်ယောက်တည်း အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။ဆံပင်လေးကို တစ်ဖက်ကိုဖါးလျားလေး ချပြီး၊ တစ်ဖက်ကို နားရွက်နောက်ကို သပ်တင်ထားပါတယ်။ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ ရုပ်ရှင် အနှေးပြကွက်လိုပါပဲ ထင်းကနဲ၊ လင်းကနဲ ရင်ထဲကို တစ်စစ်ခြင်း ထိုးနစ်ဝင်ရောက်နေတယ်။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ ကျွန်တော်အားမလို၊အားမရဖြစ် လာတယ်။ သူမကို တစ်ခါတည်း မိတ်ဆက်ပြီး ဘယ်လောက်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း တစ်ခါတည်း ပြောပစ်လိုက်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘတ်(စ်)ကားပေါ်က စာတန်းလို ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့ ပြန်ပြန်ထိန်းနေရတယ်။အချစ်ဆိုတာ နွေရာသီမှာထွက်တဲ့ နှပ်ချီးလိုပဲ လူကိုနေရ၊ထိုင်ရ အတော်ခက်စေတယလို့် ကောက်ချက်ချမိတယ်။ ခဏအကြာ တီချယ်က ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်အိမ်စာပေးပြီး အတန်းဆင်းလိုက်ပါတယ်။ အားလုံးစာအုပ်တွေသိမ်းပြီး ထပြန်တော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ နတ်သမီးလေးက ထိုင်ရကတောင်မထသေးပါဘူး။ သူမက တစ်စုံတစ်ခုကိုအပြင်းထန် စဉ်းစားနေပုံရတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ မျက်မှောင်ကျုံကျုံပြီးတော့ အလေးနက်စဉ်းစားနေသေးတယ်။ ဘာတွေများ ဒီလောက်အရေးတကြီး တွေးနေပါလိမ့်လို ကျွန်တော်တောင် တအံတသြဖြစ်သွားတယ်။ တီချယ်လည်း စိတ်ဝင်စားသွားပုံရပါတယ်။သူမ အနားကို လာမေးတယ်။
“သမီး..စဉ်းစားနေတာပါ ချယ်..” သူမက အေးအေးဆေးဆေးပဲ ပြန်ဖြေတယ်။
“သြော်… ပုစ္ဆာကခက်လို့လား တီချယ်ကိုပြကြည့်လေ”
တီချယ်က ရှင်းပြဖို့ထိုင်ခုံမှာဝင်ထိုင်တော့ သူမက စာအုပ်ကိုပိတ်ပြီး
“ပုစ္ဆာက လွယ်ပါတယ်..ချယ်..သမီးစဉ်းစားနေတာက လူတွေသေရင် ရှေ့မှာဘာလို့ ရေအိုးကို ခွဲကြတာလဲ..သိချင်လို့..စဉ်းစားနေတာ အခုထိမရဘူး..တီချယ်သိရင် သမီးကို ပြောပြပါလားဟင်”
သူမက တကယ်လိုလိုလားလားကို သိချင်တဲ့ပုံမျိုးနဲ့ မေးနေတာ။ တီချယ်လည်း တစ်ချက်အမ်းသွားပြီး နောက်မှ တစ်စုံတစ်ခုကို သတိရသွားသလို မှားပြီ ဆိုတဲ့ ပုံမျိုးနဲ့ ဟိုလှည့်ဒီလှည့်နဲ့ ကျွန်တော့်ကို လှမ်းကြည့်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကြောင်သွားတယ်။ သူမကပါ ကျွန်တော့်ဘက် လှည့်လာပါတယ်။ တီချယ်က စစ်ကူတောင်းတဲ့အနေနဲ့ ကျွန်တော့်ကို လှမ်းကြည့်ပြီး
“ ရဲထွဋ်ကတော့ ရလိမ့်မယ်..သမီးရဲ့ သူကစာအရမ်းဖတ်တယ်.. တီချယ်ကတော့ စာဖတ်အားနည်းတော့ သိပ်မသိဘူး.. သား..သမီးကို တစ်ချက်ရှင်းပြလိုက်ပါကွယ်.. တီချယ်နောက်တစ်ဝိုင်း ရှိသေးလို့ သွားလိုက်ဦးမယ်”
တီချယ်လည်း မပြေးရုံတမယ်ပဲ ဆင်းသွားတယ်။ ကျွန်တော့်မှာတော့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ရင်ခုန်ရမယ့်အစား ချွေးပြန်ချင်လာတယ်။ သူမ ပုံမှန်ရော ဟုတ်ရဲ့လား။ ဘုရား၊ သိကြားမလို့ ကောင်းကောင်းကန်းကန်းလေးဖြစ်ပါစေ။ သြော်…ကြိုမမြင်ရတဲ့ အလွဲဆိုတာ ဒါမျိုးဖြစ်မယ်ထင်ပါ့။ ကျူရှင်မှာလည်း တခြားဘယ်သူမှလည်း မရောက်သေးဘူး။ သူမနဲ့ ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်း။ သူမပုံစံက ရေအိုးပြဿနာမှ မရှင်းနိုင်ရင် ပြန်မယ့်သဘောမရှိဘူး။ သူမက ကျွန်တော့် အနားကို တိုးလာတယ်။
Posted by မိုးနင်း at 10:37 PM2comments
အဟဲ..တင်ရင် ကောင်းမလား ၊ မတင်ရင် ကောင်းမလားလို့ စဉ်းစားနေတာနဲ့ အချိန်တွေ ကြာသွားတယ်။ အခုတော့ တင်လိုက်ပြီဗျာ။ အောက်က ပုံလေးကို ကြည့်ပြီး ခန့်မှန်းကြည့်လိုက်ပါ။ ဘယ်ဆိုဒ်လောက်ရှိမလဲဗျ။
34B, 36C, 38D.....or what? တဲ့။
တစ်ခါတစ်လေ မျက်စိ မမြင်ဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ သန္တာန်မှာ စွဲနေတာနဲ့ပဲ ဦးနှောက်ကို အလုပ်မလုပ်ပဲ ဆုံးဖြတ်မိတတ်ကြတယ်။ အခု အဖြေရပြီလားဗျ။ ဘယ် ဆိုဒ်လောက်ဖြစ်မလဲ။ အင်းလေ။ အဖြေမရရင်လည်း အောက်မှာပဲ ကြည့်လိုက်ပါတော့ ၊ ဒါက ဘာပုံလဲ ဆိုတာကို။ ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး ပြုံးရရုံလေးပေါ့။
အဖြေရပြီလား။ မရသေးရင် မြားလေးကို ဆွဲပြီးသာ အောက်ကို ကြည့်လိုက်တော့...
credit: “ www.zaw357.net ” ကိုဇော်
ကိုကြီးကိုဇော်ဆီက တွေ့လို့ သဘောကျတာနဲ့ မလာလိုက်တာပါ။
Posted by မိုးနင်း at 10:20 PM0comments
ငါ့ဘ၀ဟာ အသက်ရှုရင် တစ်ခန်းရပ်သွားပြီ
အခုတော့ နေ၀င်ချိန်ဟာ ငါ့အတွက်ဖြစ်သွားပြီ
Posted by မိုးနင်း at 3:34 PM0comments
ဒို၊ ရေ၊ မီ၊ ဖာ
တိမ်စိုင်ထဲမှာ ရင်တွေ အရမ်းခုန်တယ်
လှောင်အိမ်မှာ တကယ်ပျော်သလား ငှက်ငယ်ရယ်
ငါနားမလည်တဲ့ တင်း၊ ကျပ်၊ ပြား ပုစ္ဆာတွေလိုပါပဲ
နံရံမှာ ရေးနေကြ စာတစ်ကြောင်းကို သတိရတယ်
ငါနင့်ကို “...........” ။
Posted by မိုးနင်း at 9:34 PM0comments
မိန်းမတို့၏မာယာ ဆိုသည်မှာ မိန်းမတို့၏ လျိုဝှက်သော အပြုအမူသာဖြစ်သည်။မိန်းမတို့၌ မာယာဖြစ်ပေါ်ရခြင်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်၏ လှုံဆော်မူ၊ မဟာယောကျာ်းတို့၏ ဖိနှိပ်မူကြောင့်ဟုဆိုနိုင်သည်။ အမှန်မူ မိန်းမသားတို့၌ မာယာဖြစ်ပေါ်ရခြင်းမှာ ယောကျာ်းတို့အား နှိပ်စက်ကလူပြုရန်မဟုတ်။ သူတို့ရင်ထဲ၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော အကြောင်းကို မသိမသာ ဖော်ထုတ်ခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။ယင်းသို့ မိန်းမသားတို့၏ ရင်တွင်း ဖြစ်ပေါ်မူ မာယာအား အနက်ဖွင့်အမျိုးမည် ခွဲခြားလိုက်လျင် အမျိုးပေါင်း(၄၀) ရှိသည်ဟုတွေ့ရသည်။
၄င်းမာယာ (၄၀)တို့အား ဖော်ပြပါအံ့..။
* မိန်းမမာယာ (၄၀)...
၁။ ၀ိဇမ္ဘတိ။ ။ ဦးခေါင်း၊ခြေ၊ လက်တို့ကို ဆန့်ပြခြင်း။(မိမိချစ်သူ ဝေးရာမှဖြစ်စေ၊ နီးရာမှဖြစ်စေ ဦးခေါင်းခြေလက် လှုပ်ရှားဆန့်ပြခြင်း။
၂။ ၀ိနမတိ။ ။ ခါးကို ရှေ့နောက်ကုန်းကော့ပြခြင်း။(မိမိချစ်သူ မိမိကိုယ်နေဟန်ထားကို စွဲမက်စေရန် ကိုယ်ကာယကို နွဲ့ညွှတ်ပြခြင်း။
၃။ ၀ိလာသတိ။ ။ စောင်း၍လည်းကောင်း၊ ပက်လက်လည်းကောင်း အိပ်ပြခြင်း။ (မိမိချစ်သူ မိမိအားတပ်မက်လာစေရန် ပြခြင်း။)
၄။ ၀ိလဇ္ဇာတိ။ ။ ရှက်စနိုးဟန် မရဲတရဲပြခြင်း။(မိမိချစ်သူအား မချိုမချဉ်မျက်နှာပေးဖြင့် နွဲ့သလို ပြုလုပ်ပြခြင်း။)
၅။ နစေန နခိယဋေတိ။ ။ လက်သည်းခြင်း ထိခိုက်ပွတ်ပြခြင်း။(မိမိချစ်သူရှေ့တွင် မျက်လုံးမှေးစင်းကာ စဉ်းစားသလို လက်သည်းခြင်း ပွတ်ပြခြင်း)
၆။ ပါဒေနပါတံ အက္တမဟိ။ ။ ခြေဖြင့် ခြေဖ၀ါးတစ်ဖက်ကို ဖိနင်းပြခြင်း။(မိမိချစ်သူရှေ့တွင် အလိုမပြည့်ဟန် ဖြင့် ခြေဆောင့်နင်းပြခြင်း)
၇။ ကဠေန ပထ၀ိံငိလေတိ။ ။ တုတ်ဖြင့် မြေကြီးကို ရေးခြစ်ပြခြင်း၊(မိမိချစ်သူရှေ့တွင် အတွင်းဆွေး ဆွေးနေဟန် မြေ၊ သင်ဖျူးကို ရေးခြစ်ပြခြင်း။)
၈။ ဒါရကံ၊ နလ္လဃာလတိ။ ။ သူငယ်ကိုမြှောက်ချီပင့်ခြင်း။ (မိမိချစ်သူရှေ့တွင် ကလေးသူငယ်အား မြှောက်ပင့်ချီပြခြင်း။)
၉။ ကိဋတိ၊ ကိဋာလေတိ။ ။ ကလေးနှင့်ကစား၍ ခုန်ပြေးပြခြင်း။(မိမိချစ်သူရှေ့တွင်ကလေးနှင့် ခုန်ပေါက်ပြေးလွှားဆော့ခြင်း။)
္လ၁၀။ ခုမ္ဗတိ၊ ခုမ္ဗပေတိ။ ။ ကလေးကိုနမ်း၏။ နမ်းစေ၏။(မိမိချစ်သူရှေ့တွင် ကလေးကိုနမ်းပြခြင်း၊ နမ်းစေခြင်း)
၁၁။ ကုဉ္စပေတိ။ ။ စားစေ၏။စားသောက်ခိုင်း၏။(မိမိချစ်သူရှေ့တွင် ကလေးကိုစားစေခြင်း၊ စားသောက်ခိုင်းခြင်း)
၁၂။ ပဒါတိ။ ။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးကမ်းခြင်း။(မိမိချစ်သူအား လက်ဆောင်ပစ္စည်း ပေးကမ်းခြင်း)
၁၃တ။ ကတံ၊ အနုကယေိာ။ ။ ချစ်သူလုပ်သမျှ အတူလုပ်ပြခြင်း။(မိမိချစ်သူ လုပ်သမျှကို လိုက်၍လုပ်ပြတက်ခြင်း)
၁၄။ နစ္စံတာသတိ။ ။ ချစ်သူဂုဏ်ကို အမြင့်ဆုံး ပြောပြခြင်း။(မိမိချစ်သူအား အမြဲဂုဏ်ယူမြှင့်တင် ပြောခြင်း)
၁၅။ နိစ္စံဘာသတိ။ ။ သူများက ချီးမွမ်းလျင် မိမိက နှိမ်ချပြောခြင်း(သူတစ်ပါး ချီးကျူးသည်နှင့် ဆန့်ကျင်ကာ နှိမ်ချပြောခြင်း)
၁၆။ အ၀ိစ္စံ ဘာသတိ။ ။ ချစ်ကြိုက်ကြောင်းကို ဖွင့်ဟ ဗြောင်ပြောခြင်း။(မိမိချစ်သူအား နှစ်သက်စွဲလမ်းချစ်ခင်ကြောင်း ဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်း)
၁၇။ ဇိဝိစ္စံ ဘာသတိ။ ။ ဥပမာ စကားတို့ဖြင့် ချစ်ကြောင်းပြောခြင်း။(မိမိချစ်သူအား စွဲလမ်းချစ်ခင်ကြောင်း ဥပမာတို့ဖြင့် ကွယ်ဝှက်ပြောဆိုခြင်း)
၁၈။ နိစ္စံ။ ။ ကခုန်ပြခြင်း(ချစ်သူရှေ့တွင် ကခုန်တက်ကြောင်း ကပြခြင်း)
၁၉။ ဂီတ။ ။ သီချင်းညည်းခြင်း(ချစ်သူရှေ့တွင် သီချင်းသီဆိုခြင်း)
၂၀ ၀ါဒိတံ။ ။ တီးမှုတ်ပြခြင်း( ချစ်သူရှေ့တွင် တီးမှုတ်ပြခြင်း)
Posted by မိုးနင်း at 3:55 PM0comments
Posted by မိုးနင်း at 10:35 PM0comments
" A "သွေးပိုင်ရှင်များ ၏ထူးခြားချက်
သွေးအမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို ခန့်မှန်းလို့လည်း ရပါတယ်..ဒီနေ့တော့
ငယ်စဉ်ဘ၀မှာတော့ သူတပါးကို စဉ်းစားပေးတယ်ဆိုတာ သိပ်မရှိခဲ့ဘဲ ကိုယ်အတွက်ကိုသာ စဉ်းစားတတ်ကြပါသတဲ့... သူတပါးကို
နောက်ပြောင်ရတာကိုလဲ ကြိုက်နှစ်သက်ပါသတဲ့... ဒါပေမယ့် ကြီးပြင်းလာတာနဲ့
အမျှ ငယ်စဉ်က စရိုက်သဘာဝများက တဖြည်းဖြည်း ပြောက်ကွယ်သွားပြီး သူများတကာတွေ
အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အခါမှာတော့ ကိုယ်လုပ်ရမည့် အရာအားလုံးကို တာဝန်သိစွာ လုပ်ကိုင်တတ်သူများ
ဖြစ်လာပါတယ်တဲ့... တခါတလေ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ မကောင်းတဲ့ အခါမှာ
စိတ်လေလွင့်တတ်ပါတယ်တဲ့... အသစ်အဆန်းတွေကို စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်တာထက်
ကျင့်သားရနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အေးအေးချမ်းချမ်း ကျင်လည်ရတာကို
နှစ်သက်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်... အလုပ်တစ်ခုကို
လုပ်ပြီဆိုရင်လည်း အလျင်လိုတာမျိုး မရှိဘဲ အဆင့်လိုက် အဆင့်လိုက် တဖြည်းဖြည်းချင်း
ဖြေရှင်းတတ်တဲ့ စတိုင်လ် ပါ... သပ်သပ်ရပ်ရပ် စေ့စေ့စပ်စပ်နဲ့
အလုပ်တစ်ခုကို ပြီးဆုံးအောင် လုပ်တတ်သူများပါ...
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လုပ်နေကြ အလုပ်တွေကိုပဲ လုပ်နေတတ်လို့ အသစ်အဆန်းကို မရှိဘူးလို့
အပြောခံရတာကိုလည်း ခံရတတ်ပါတယ်... ဒါ့အပြင် ဘယ်လို အခြေအနေမျိုး မဆို
ကြိုက်တယ် မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ အတွေးဟာ ပြတ်သားလွန်းတာကြောင့်
မာဆတ်ဆတ်နိုင်တယ်... ဘုကြတယ် ဆိုပြီး အပြောခံရတာမျိုးလည်း
အေသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ သူများနဲ့ မတူ ထူးခြားချက်ကတော့ တနေ့တာအတွင်း ပေါ်ပေါက် ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အလုပ် မှန်သမျှကို
စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်တတ်ပေမယ့် စိတ်ရှုတ်လွယ်တဲ့ လူမျိုးတွေပါတဲ့... ကိုယ်နဲ့
ဆက်ဆံနေတဲ့ လူတွေကို နွေးနွေးထွေးထွေး ဆက်ဆံတတ်ပြီး သူတပါကို
ပျော်ရွှင်မှုပေးချင်ကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်... တခါတလေမှာတော့ သူများကို
မယုံမကြည် ဖြစ်တတ်လို့ ကိုယ့်အကြောင်းတွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောဘဲလည်း
နေတတ်ပါသတဲ့... ဒီလို မယုံကြည်တတ်တဲ့ သဘောထားကြောင့် လူတွေနဲ့
တစ်ချပ်ချထားပြီး ဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်တဲ့... ဒီသဘာဝလေးကတော့ သူတို့ရဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်လေး တစ်ခုပါတဲ့... ဘ၀ရဲ့
အနှစ်သာရကို တစ်နေရာမှာဘဲ မရှာဘဲ အားလပ်ရက်ကိုလည်း ခုံမင်တတ်ပါတယ်တဲ့...
အားလပ်တဲ့ အခါမှာ လျှောက်လည်ရတာကိုလည်း နှစ်သက်သလို လျှောက်လည်လို့
မနှမျောပါဘူးတဲ့... တစ်ယောက်တည်း သီးသန့် ကမ္ဘာလေးကို တည်ဆောက်ချင်သူများ ဖြစ်ပါတယ်... အထက်လူကြီးရဲ့
အဆူခံရတာမျိုးကို ခံပြီးပြီဆိုရင် မေ့လို့ မရဘဲ စိတ်ထဲမှာ
ဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာလည်း ဒေါသကို ဖော်ပြလေ့မရှိတာကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှု ပိုများတာ ဖြစ်ပါတယ်...
ရှိတတ်ပါတယ်တဲ့... ဒါကြောင့်မို့ စိတ်ထဲက မကြေနပ်ချက်လေးတွေကို တခါတလေ
ဒီကနေ့ ဖော်ပြပေးလိုက်တာကတော့ အေသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ စရိုက်သဘာဝများဘဲ ဖြစ်ပါတယ်... ကျွန်တော်နဲ့
ကျွန်မက စံ ဇာဏီဘို မဟုတ်ပေမယ့် စိတ်နှလုံး အပန်းဖြေနိုင်ရန် အတွက်
ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်... နောက်နေ့ နောက်နေ့တွေမှာတော့ ကျန်နေသေးတဲ့
သွေးအုပ်စုများ အကြောင်းကို ဆက်လက် တင်ပြသွားပါဦးမည်...
ဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ စိတ်နေသဘောထားများကို တင်ပြမှာ ဖြစ်ပါတယ်
ဘီသွေးပိုင်ရှင်များကတော့ အရမ်းငယ်စဉ်မှာတော့ သွက်လက်ဖျက်လတ်ပြီး တက်တက်ကြွကြွနဲ့ လှုပ်ရှုားတတ်ပေမယ့် ကျောင်းစတတ်တဲ့
အရွယ်လောက်ကစပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေအောင် မနေတတ်ဘဲ
လေလွင့်နေတတ်ပြန်ပါသတဲ့... ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိပြီ
ဆိုရင်တော့ အားလုံးထက် ပိုပြီး ကြိုးကြိုးစားစားနေတတ်ကြတဲ့ သူများဖြစ်လို့
ရှုံးနိမ့်မှုကို မကြောက်ဘဲ မပြတ်သော ဇွဲလုံ့လနဲ့သာ ဆက်လက်ပြီး ကြိုးစားပါ...
ကိုယ်သဘောကျတဲ့ အလုပ်တစ်ခုတည်းမှာဘဲ အာရုံအားလုံးကို နှစ်မြုပ်ထားတတ်တဲ့
စတိုင်လ် ဖြစ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေက မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့
သိပ်မကြိုးစားတတ်ကြပါဘူးတဲ့... ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘီသွေးပိုင်ရှင်များဟာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပုံစံအတိုင်း
ဆက်ဆံရတာမျိုးကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး... ကိုယ်နဲ့ သိပ် မခင်လှတဲ့
မိတ်ဆွေတွေနဲ့ အတူရှိတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဟန်မပျက် အလိုက်တသင့်
နေတတ်ကြသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... မျက်နှာခွဲခြားတတ်ပြီးတော့ တခြားသူတွေရဲ့
ရှေ့မှာ လူတတ်လုပ်ရတာမျိုးကိုလည်း မနှစ်သက်တတ်ကြပါဘူး...
ဘီသွေးပိုင်ရှင်များဟာ ပုံစံခွက်ထဲမှာ ချုပ်နှောင်ခံရတာမျိုးကို မုန်းပြီး
လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာလှုပ်ရှားရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်တဲ့... ဒါပေမယ့်
သတိပြုစရာ တစ်ခုကတော့ လွတ်လပ်မှုကိုဘဲ အစဉ် တောင့်တနေခြင်းကြောင့်
ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို ဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဆိုတာကိုပါဘဲ...
ဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ သူများနဲ့မတူ တမူထူးခြားနေတာကတော့ လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်တတ်တဲ့အပြင်
သူတပါးကို မှီခိုအားကိုနေရတာမျိုးကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး...
ကိုယ်အားကိုကိုးပြီး အလုပ်အားလုံးကို ဆောင်ရွက်ချင်ကြပါတယ်...
အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်နေစဉ်မှာတောင် တခြားအလုပ်တစ်ခုကို တပြိုင်တည်း
ဆောင်ရွက်တတ်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို သိပ်
ဂရုမစိုက်တတ်လို့ ကိုယ့်ထက် အငယ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို ခံရတတ်ပေမယ့်
လူကြီးတွေဆီကတော့ ဆူပူကြိမ်းမောင်းတာကို ခံရတတ်ပါတယ်... တခါ
ဒေါသထွက်ပြီဆိုရင်လည်း အဖြူအမည်း မခွဲခြားနိုင်လောက်အောင်ပါဘဲတဲ့...
စတိုင်လ်မျိုးပါတဲ့... အမှားတစ်ခုကို လုပ်မိတယ် ဆိုရင်လည်း ကိုယ်လုပ်တဲ့
အမှားအတွက် တောင်းပန်ဘို့ ၀န်မလေးသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... တနည်းအားဖြင့်
အတွင်းစိတ်ထား ပွင့်လင်းသူများ ဖြစ်ကြလို့ အထင်အလွဲခံရတာတို့ ရန်ညှိးတို့
မရှိတဲ့ သွေးပိုင်ရှင်များ ဖြစ်ပါတယ်
ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ သွေးအမျိုးအစားများ အကြောင်းကိုလည်း ဆက်လက် ဖော်ပြသွားပါမည်..
ဒီတစ်ခါ အိုသွေးပိုင်ရှင်များ အကြောင်း တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်... အိုသွေးပိုင်ရှင်များကတော့ စရိုက်သဘာဝက
အိုသွေးပိုင်ရှင်များကတော့ အိမ်မှာတော့ ပြဿနာရှာတတ်ကြပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆိုရင်တော့ သူငယ်ချင်းတွေကို
ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တတ်ပြီး လူတကာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေအောင်
နေတတ်သူများဖြစ်ကြပါတယ်... အရာအားလုံးကို တက်တက်ကြွကြွနဲ့
ပါဝင်ဆောင်ရွက်တတ်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်... အလုပ်အားလုံးကိုလည်း
ကိုယ့်အလုပ်လို့ သတ်မှတ်ပြီး ကြိုးကြိုးစားစား ဆောင်ရွက်တတ်ကြသူများ
ဖြစ်ပါတယ်... လုပ်ငန်းခွင်ကို ရောက်ပြီဆိုရင်လည်း သူတပါးကို
စာနာထောက်ထားတတ်ကြပါသတဲ့... အနာဂတ်အတွက် ရည်မှန်းချက် တစ်ခု ရှိပြီဆိုရင်
တစိုက်မတ်မတ်နဲ့ လုပ်ကိုင်တတ်ပေမယ့် မျှော်လင့်ချက် မရှိဘူးလို့
ထင်မိပြီဆိုရင်တော့ အစွဲအလမ်း တစ်ခုမှမထားဘဲ လက်လျှော့ပစ်တဲ့
အကျင့်လေးများလည်း ရှိပါတယ်တဲ့... အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း
မြင့်မားသလို အခြေအနေ အလိုက် စိတ်စုစည်းမှုလည်း ကောင်းမွန်ပါသတဲ့...
ရလဒ်ကိုဘဲ ဦးစားပေးသူများလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါသတဲ့... အလုပ်တစ်ခုကို
လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် plan အရင်ချပြီးမှ လုပ်ကိုင်လေ့လည်း ရှိပါသတဲ့... ကိုယ့်
စတိုင်လ်နဲ့ကို နေတတ်သူများဖြစ်သလို ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်များကို
ပိုင်ဆိုင်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... ဒီလို စရိုက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေ
ဖြစ်တာမို့ အနုပညာလောကကို ခြေချမယ်ဆိုရင်လည်း အောင်မြင်နိုင်တဲ့သူများ
ဖြစ်ပါတယ်တဲ့.... ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရဲ့ အတွေးအမြင်ကသာ အမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့
ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်... အပန်းဖြေတာတို့ ၀ါသနာကို အကောင်အထည် ဖော်တာတို့ကိုတော့
သိပ်မနှစ်သက်လှပါဘူး... အိုသွေးပိုင်ရှင်များက လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ကိုင်ရတာကို
နှစ်သက်ကြသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... တခါတလေမှာတော့ Romantic
အိုသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ကိုယ့်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေအတွက် အများကြီး
သည်းခံတတ်ပေမယ့် ရေရှည်တော့ သည်းမခံနိုင်ပါဘူးတဲ့... လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့
အခါမှာ ယုံကြည်မှု ရှိရှိနဲ့ ဆက်ဆံတတ်ပြီး ကိုယ့်ထက် အားနည်းသူနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့
အခါမှာတော့ နွေးနွေးထွေးထွေး သဘောထား ကြီးကြီးနဲ့ ဆက်ဆံတတ် ကြပါသတဲ့...
ပြိုင်ချင်တဲ့ စိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်လို့ တခါတလေမှာ မလိုအပ်ဘဲ
စိတ်ဆင်းရဲရတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်... အိုသွေးပိုင်ရှင်များက တခါတလေမှာ
စကားနည်းပြီး အေးအေးဆေးဆေး တစ်ယောက်တည်း တွေးခေါ်နေရတာကို
ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါသတဲ့... တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်တဲ့
အခါတိုင်း စိတ်ထဲမှာ စုမထားဘဲ တဘက်သားကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောတတ်ပါသတဲ့...
ဒါပေမယ့် အားလုံး ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာတော့ ဒါတွေ ငါ ဘယ်တုန်းက လုပ်ခဲ့လို့လဲ
ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး အားလုံးကို မေ့ပြီးနေနိုင်သူများပါ...
ကျန်နေသေးသော အေဘီသွေး အကြောင်းကိုလည်း ဆက်လက် တင်ပြသွားပါဦးမည်....
အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ ထူးခြားချက်ကတော့ ဒီလို ဖြစ်ပါတယ်... အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များဟာ သိပ်ပြီး မထူးခြားလှတဲ့
မိဘကို ဆိုးတာမျိုးလည်း မရှိတဲ့ အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များက အရာအားလုံးကို ကွက်ကျော်မြင်တတ်လို့
အဆူခံရတာမျိုးလည်း လုံးဝ မရှိသလောက်ပါတဲ့... ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
ဘာတွေဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို လျင်လျင်မြန်မြန် အကဲခတ်နိုင်စွမ်းရှိသူများလည်း
ဖြစ်ပါတယ်... ဒါကြောင့်မို့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေက အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များကို
စကားနည်းပြီး ဘုကျကျနိုင်လိုက်တာလို့ အပြောခံရတာမျိုးလည်း ကြုံရတတ်ပါတယ်...
ဒါပေမယ့် ကြီးပြင်းလာတာနဲ့ အမျှ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လိုက်လျောညီထွေအောင်
နေတတ်လာပြီး လူမှုဆက်ဆံရေးလည်း ကောင်းမွန်ပြေပြစ်လာပါတယ်တဲ့...
အစပိုင်းမှာတော့ အလုပ်တစ်ခုကို ကြာရှည်လုပ်နိုင်တဲ့ ဇွဲ နည်းပါးတာကြောင့်
အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်တဲ့ အခါမှာ မြန်မြန် ပင်ပန်းအားလျော့ လွယ်ပါတယ်တဲ့...
ဒါပေမယ့်လည်း ၀ီရိယစိုက်ပြီး ကြိုးစားနေတဲ့ ကိုယ်ကိုတိုင်ရဲ့ ပုံစံကို
ကြိုးကြိုးစားစား တက်တက်ကြွကြွနဲ့ လုပ်ဆောင်တတ်ပါတယ်တဲ့... လူတွေနဲ့
ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာလည်း အပြောအဆိုကို အတတ်နိုင်ဆုံး သတိထားတတ်ပြီး
လုပ်ငန်းခွင်မှဆိုရင်လည်း အမှားမလုပ်မိအောင် သတိထား လုပ်ကိုင်တတ်သူများ
ဖြစ်ပါတယ်... လူတစ်ယောက်နဲ့ တော်တော်လေး ရင်းနှီးလာတာတောင်မှ အဲဒီလူနဲ့
ကိုယ့်ရဲ့ ကြားမှာ အတားအဆီး တစ်ခုကို
ထားပြီးဆက်ဆံတတ်သူများလည်းဖြစ်ပါတယ်... ဒါကတော့ သူတပါးအပေါ်မှာ
အမှားလုပ်မိမှာကို စိုးရိမ်တတ်တဲ့ အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ အသေးစိတ်လှတဲ့
အတွေများကြောင့်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်... ဒါ့ပြင် အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များဟာ
တစ်ယောက်တည်းကိုဘဲ ခင်တတ်တဲ့ အကျင့်လည်းမရှိပါဘူးတဲ့... အလုပ်အများကြီးကို
တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိသူများ ဖြစ်သလို အရာအားလုံးကို
လက်တွေ့ကျကျ တွေးခေါ်ဆင်ချင်တတ်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... အလုပ်တစ်ခုကို
ဖြစ်ပါတယ်တဲ့... မိဘဆွေမျိုး သူငယ်ချင်းရယ်ဆိုပြီး သီးသန့် မခွဲခြားတတ်ဘဲ
လူသားအားလုံးကို တန်းတူညီတူ ဆက်ဆံတတ်သူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့်
တဘက်မှာလည်း အမြဲတမ်း ငွေရေးကြေးရေးကို စိတ်ပူနေတာကြောင့်
ပိုက်ဆံရှာနိုင်မယ့် အခြေအနေများကို အပူတပြင်း ရှာဖွေနေတတ်ပါတယ်တဲ့...
အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များက ကိုယ့်ရဲ့ ခံစားချက်ကို မျက်နှာမှာ
မဖော်ပြတတ်သူများ ဖြစ်သလို တော်ရုံတန်ရုံနဲ့ ဒေါသလည်း မထွက်တတ်ပါဘူးတဲ့...
ကိုယ့်ကို သစ္စာဖောက်သွားတဲ့သူကိုတော့ သေချာ မှတ်ထားပြီး ကလဲ့စားခြေတတ်တဲ့
စရိုက်သဘာဝကို ပိုင်ဆိုင်သူများ ဖြစ်ပါတယ်... တခါတလေတော့ နူးညံ့တဲ့
စိတ်နေစိတ်ထားကို အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ မျက်နှာမှာ မြင်နိုင်သလို
တခါတလေမှာတော့ ခက်ထန်မှုတွေကိုသာ မြင်ရတတ်ပါတယ်.... ဒါတွေအားလုံးကတော့
အေဘီသွေးပိုင်ရှင်များ အကြောင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်...
Posted by မိုးနင်း at 4:59 PM0comments
လူကြီးပြောတတ်သည်က နွားရိုင်းသွင်းချိန် (သို့)အပုပ်ချိန်..။
ဖိုးထူးတစ်ယောက် ဂဏာမငြိမ်ဖြစ်နေသည်။ သူကျောင်းနေသည့် နွားတွေဆီပင် အာရုံမရောက်နိုင်။ နေ၀င် သည့်ဘက်သို့သာ လှမ်းလှမ်းကြည့်နေသည်။ သည်နေ့က သင်္ကြန်နောက်ဆုံးနေ့။ ရပ်ရွာဓလေ့ထုံးစံအတိုင်း ပုံးတွေ၊ ခွက်တွေ တီးနေကြသည်။ မကောင်းဆိုးဝါးများကို ရပ်ရွာထဲမှ နှင်ထုတ်ခြင်း အလေ့အထပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒါတွေလည်း ဖိုးထူး ဂရုမစိုက်အား။ သူတွေးနေသည်က ညနေက ဦးမြင့်အောင်ပြောသွားသော စကားပင်ဖြစ်သည်။ ဦးမြင့်အောင်နှင့်သူတို့နဲ့က တကယ့်မိသားစုအရင်းချာတွေလိုဖြစ်သည်။ ဦးမြင့်အောင်က လယ်လုပ်သည်။ အဝေးကြီးတော့ မဟုတ်။ သူတို့ရွာအနောက်ဘက်တွင်သာ။ သူတို့နှစ်ယောက်က ရင်းနှီးသည်ထက် ပိုသည်။ အမှန်တော့ သောက်ဖော်သောက်ဖက်တွေသာ။ မနက်က သူ့ဆီလာသည်။ ညနေကျလျှင် သူကွင်းမြှောက်မယ်..မင်းလာချင်ရင်လာခဲ့..တဲ့။ ကွင်းမြှောက်တယ်ဆိုတာက ကွင်းပိုင်အဘိုးကို အရက်နဲ့ တင်မြှောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ လယ်မြေအထွက်ကောင်းဖို့ တခြားအနှောက့်အယှက်တွေကင်းဖို့..ဒါတွေက လယ်သမားတွေရဲ့ အယူအဆ။ အခုလည်း ဦးမြင့်အောင်က ကွင်းမြှောက်မည်..အရက်နှင့်..အမြည်းကတော့ ကြက်ကောင်လုံးကြော်ဆိုတော့ ဖိုးထူးအတွက် မပစ်ရက်နိုင်စရာ အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုဖြစ်နေသည်။ သူနွားတွေကို စောစောသိမ်းလိုက်သည်။ အိမ်ကထွက်တော့ အမေက မှာနေသည်။ ရွာအပြင်မထွက်ဖို့..။ အခုချိန်က သရဲမောင်းချိန် ဘာညာဖြင့် ပြောနေသည်။ ဖိုးထူးက သိပ်တော့ အယုံကြည်မရှိ။ ယုံဖို့လည်း မစဉ်းစား။ သူစဉ်းစားသည်က ကွင်းမြှောက်ပြီးလျှင် သောက်မည်။ မနက်ကျမှ ဦးမြင့်အောင်နှင့်ပြန်တက်လာမည်။ အတွေးထဲမှာတော့ အားလုံး အိုကေ။ တစ်ရွာလုံးဆူညံနေသည်။ ပုံးသံတွေအပြင် တခြားအမျိုးမည်မသိ အသံပေါင်းစုံ။ လူကြီးတွေက ပုံးတွေ၊ သံစည်ပိုင်းတွေ တီးသည်။ ကလေးတွေကတော့ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ လက်ထဲရှိတာတီးကာ ပျော်နေကြသည်။ ဖိုးထူးတစ်ယောက် ခပ်သုတ်သုတ်ဖြင့် ရွာအနောက်ဘက်လမ်းအတိုင်း ထွက်လာသည်။ သူတို့နေတာက ရွာဆိုပေမယ့် အရမ်းရွာအဆန်ကြီးတော့ မဟုတ်။ အိမ်ခြေစေ့သည်။ ဟိုမရောက်၊ ဒီမရောက် ရွာဖြစ်သည်။ ရွာနဲ့ ဦးမြင့်အောင် တဲနဲ့ကလည်း သိပ်မဝေး။ နာရီဝက်လောက်လျှောက်လိုက်လျှင် ရောက်ပြီ။ ပြီးတော့ လမ်းတစ်လျှောက်ကလည်း ပြတ်လပ်နေတာမဟုတ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းလည်း ရှိသေးသည်။ ဒါ့အပြင် သွားနေကြခရီးလည်း ဖြစ်ပြန်တော့ တခြားဘာတွေ၊ညာတွေ သူသိပ်ဂရုမစိုက်။ ရွာကထွက်လာတော့ ပဲ အတော်မှောင်နေပြီ။ ပြောမယ့်သာပြောတာ တစ်လမ်းလုံးမှ သူတစ်ယောက်တည်း။ ခဏကြာတော့ ရှေ့မှာ လူတစ်ယောက်ကို လှမ်းမြင်ရသည်။ သိပ်တော့ မသဲကွဲ။မှောင်ကလည်း မှောင်နေပြီ။ ထိုလူက ခပ်သွက်သွက်လျှောက်နေသည်။ ဖိုးထူးကလည်း မှီအောင်လိုက်လျှောက်သည်။ နည်းနည်းနီးလာတော့ ထိုလူက လမ်းဘေးချုံထဲသို့ ၀င်သွားသည်။ အပေါ့၊အပါး သွားတာဖြစ်လိမ့်မည်။ သူနည်းနည်းလျှောက်လိုက် ရင်တော့ အတူတူလောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။ စကားပြောဖော်တော့ ရပြီဟု ဖိုးထူးစဉ်းစားကာ အားတက်သွားသည်။ ချုံနားသို့ ရောက်လာသည်။ စောစောက လူကိုမတွေ့။ ဘယ်နားဝင်သွားလဲဟုတွေးကာ လိုက်ရှာကြည့်သည်။ မရှိ။ မြင်ကွင်းကလည်း အရှင်းကြီး။ ဖိုးထူးခေါင်းနည်းနည်း ကြီးသွားသည်။ ရင်တွေလည်း ခုန်လာသည်။ ဆက်လျှောက်တော့ ဘုန်းကြီးကျောင်းနား ရောက်လာသည်။ သူ့ဦးနှောက်ထဲသို့ အတွေးတစ်ခု ၀င်လာသည်။ သူတို့ငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားဖူးသည် အရာတစ်ခု။ ဇီးပင်သရဲ..။ ဘုန်းကြီးကျောင်းနားမှာ ရှိသော ဇီးပင်က သရဲခြောက်သည်ဟု ရွာထဲမှာ နာမည်ကြီးသည်။ ဘယ်သူ့၊ဘယ်သူတွေကို ခြောက်ခဲ့သည်လည်းတော့ မသိ။ ဒါပေမယ့် အကုန်းလုံးလိုလိုတော့ ကြောက်ကြသည်။ ဖိုးထူး ခြေလှမ်းတွေတုံ့ခနဲ ဖြစ်သွားသည်။ သူသွားမည့် လမ်းက ဇီးပင်ဘေးက။ အရင်တုန်းက ခဏခဏသွားသည်ဆိုသော်လည်း နေ့ခင်းကြောင်တောင် ကြီးဆိုတော့ ပြဿနာမရှိ။ အခုက မိုးတောင် အတော်ချုပ်နေပြီ။ ပြီးတော့ သူတစ်ယောက်တည်း။ အားငယ်စိတ်က ငယ်ထိပ်ကို တက်ဆောင့်သည်။ထိုအချိန် ဦးမြင့်အောင်စကားကို ကြားယောင်လာသည်။ အရက်နဲ့ကြက်ကြော်..။ သည်နှစ်ခုက ဖိုးထူးကို ဆွဲဆောင်နေသည်။ မသွားရင်လည်း မကောင်းဘူးဟု စိတ်ထဲမှာ တွေးမိသည်။ ဒါ့အပြင် သူ့ကို သူရဲဘော်ကြောင်သည်ဟု ထင်သွားမှာလည်း မလိုလား။ ဖိုးထူး ဆက်လျှောက်သည်။ ထိုအချိန် သူ့အနောက်မှ ၀ုန်းဝုန်းဆို လူအုပ်ကြီးတစ်အုပ်ပြေးလာသည်။ အရွယ်စုံ၊ ဆိုဒ်စုံ၊ ဂိုက်စုံ။ ထူးခြားတာက သူတို့အကုန်လုံး အ၀တ်စားမရှိကြ။ ဗလာတီးကိုယ်လုံးတွေဖြင့်။ အကုန်လုံးက ၀ရုန်းသုန်းကားဖြင့် ပြေးလာကြသည်။ လဲသူကလဲ၊ ပြန်ထူသူကထူဖြင့် သူ့ဘေးနားက ဖြတ်ပြေးသွားကြသည်။ ထူးဆန်းသည်က သူ့ကိုတစ်ယောက်မှ ၀င်မတိုက်ကြ။ တချို့ဆို သူ့ကိုယ်ကိုပင် ဖြတ်တိုက်သွားသလာဟု ထင်မိသည်။ သူ့ဘေးနားက ဖြတ်ပြေးသည်ဆိုသော်လည်း လေတိုက်သလို ဟူးခနဲဖြစ်သည်။ သိပ်မကြာ သူတို့အားလုံး ရပ်လိုက်ကြသည်။ ညီညီညာညာစီတန်းလျက်။ ဇီးပင်ဘေးမှာ..။ ဖိုးထူး ကြက်သီးတွေတဖြန်းဖြန်ထလာသည်။ ခေါင်းတွေလည်း အဆမတန်ကြီးလာသည်။ တစ်ကိုယ်လုံးလည်း ချွေးစေးတွေ ပြန်လို့..။ သူသိလိုက်ပြီ။ သရဲအခြောက်ခံရပြီ။ အရှေ့မှာပိတ်ရပ်နေသော လူတန်းကြီးက နည်းသည်မဟုတ်။ ကိုယ်လုံးတီးတွေနဲ့..။ လက်သည်းတွေကလည်း အရှည်ကြီးတွေ။ ဆံပင်ဖားလျား..မျက်လုံးစိမ်းစိမ်းတွေနဲ့ သူ့ကို ကြည့်နေကြသည်။ ဖိုးထူးတစ်ကိုယ်လုံး အသက်မဲ့သလို တောင့်တောင့်ကြီး။ သူတော့ သွားပြီဟု ထင်လိုက်သည်။ သို့သော် သူနောက်လှည့်ဖို့ မစဉ်းစားမိ။ သူ့ခေါင်းထဲသို့ အတွေးတစ်ချက်ဝင်လာသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း..။ သူတို့ရပ်နေကြသည်က ဘုန်းကြီးကျောင်းဘေးနားက ဇီးပင်ဘေးမှာ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းကလည်း လှမ်းခေါ်လျင် ကြားရသည်။ သူလည်းချောင်းထဲက ခြစ်ကာအော်လိုက်သည်။ “ဦးဇင်း..ဦးဇင်း..”..ခေါ်သံဆုံးတော့ ကျောင်းအပေါ်ထပ်က ပြတင်းပေါက်တစ်ခုမှ ဦးဇင်းတစ်ပါး ခေါင်းထွက်လာသည်။ သူအားတက်သွားသည်။ ဦးဇင်းက ဘာလဲဟု လှမ်မေးသည်။ သူဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိ။ ပါးစပ်ထဲရှိရာ..ကောက်မေးလိုက်သည်။ ဦးမြင့်အောင်ရှိလား ..ဘုရား..။ဦးဇင်းက သူ့ကိုကြောင်တောင်တောင်ဖြင့်ကြည့်ကာ မရှိဘူးဟုပြော၍ တံခါးပြန်ပိတ်သွားသည်။ သူနောင်တရသွားသည်။ နောက်တစ်ကြိမ်ခေါ်လျင်တော့ ဖွင့်တော့မဟုတ်မှန်းစိတ်ထဲကသိနေသည်။ ဒီကြားထဲ ဗြုန်းဆို ဇီးပင်ပေါ်က ဇောက်ထိုးကြီး တွဲလောင်းကျလာသည်။ ဘာကောင်ကြီးမှန်းမသိ။ ဖိုးထူးတစ်ယောက် ကူကယ်ရာမဲ့သူလို ကြောင်တောင်တောင်ကြီး ဖြစ်နေသည်။ သရဲတန်းကြီးက ရှေ့က ပိတ်လျက်။ သူ့ခေါင်းထဲမှာက အရက်နဲ့ကြက်ကြော်။ သူဘာလုပ်ရမလဲဟု အပြင်းထန် စဉ်းစားသည်။ ဖိုးထူးခါးတောင်းကို မြှောင်နေအောင်ကျိုက်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ဖိနပ်ကို ခါးကြားထိုးသည်။ သူ့ကိုယ်သူ ဘာတွေလုပ်နေမှန်းလဲ မသိတော့။ နောက် အသက်ကို ၀၀ရှုကာ အသံကုန်အော်ကာ ရှေ့မှာပိတ်ရပ်နေသော သရဲတန်းကြီးကြားကာ ဖြတ်ကာ စွတ်ပြေးလေတော့သည်။ ဟူးခနဲ့ဆို တစ်စုံတစ်ခုကို ၀င်တိုးလိုက်သလို ခံစားရသည်မှာအပ ကျန်တာသူဘာမှမသိတော့။ သူနောက်သို့လုံးဝလှည့်မကြည့်။ ဦးမြင့်အောင်တဲသို့ ဘယ်လိုရောက်မှန်းတောင် မသိတော့။ သူသတိရတော့ အိမ်ပြန်ရောက်နေသည်။ တစ်အိမ်လုံးက သူ့ကိုစိုးရိမ်တကြီး ၀ိုင်းကြည့်နေကြသည်။ ဘာဖြစ်လာတာလဲဟုလည်း အလုအယက်ဝိုင်းမေးကြသည်။ သူခေါင်းခါက ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုပြောကာ နေလိုက်သည်။ သူ့အတွေးထဲမှာတော့ မျက်လုံးစိမ်းစိမ်းကြီးတွေက မထွက်။ လူတန်းကြီး၊ ဇီးပင်ပေါ်က ဇောက်ထိုးကောင်။ နောင်မှသိရသည်မှာ သူပြေးတာ ဦးမြင့်အောင်တဲကိုပင်ကျော်သွား၍ မနည်းပင်လိုက်ဖမ်းရသည်ဟု ဆိုလေသည်။ ဘာပဲပြောပြော ဖိုးထူးတစ်ယောက် ရွာထဲမှာ ငြိမ်သွားသည်။ အရင်လိုလပ်လျားလပ်လျားမဟုတ်တော့။ အိမ်ကိုစောစောပြန်သည်။ မိုးချုပ်သည်ထိအောင် မနေတော့။ အရက်လည်း မသောက်ဖြစ်တော့။ သူ့အိမ်က ဘာဖြစ်လာမှန်းမသိသော်လည်း ဖြစ်သွားတာပဲကောင်းပါတယ် ဟုသာ ဆိုသည်။ ထူးခြားသည်က ဖိုးထူးတစ်ယောက် သင်္ကြန်ရောက်လျှင် ရိပ်သာဝင်ခြင်း ပင်ဖြစ်လေတော့သည်။
(ဤဖြစ်ရပ်သည် ဖြစ်ရပ်မှန်ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံအပ်ပါသည်)
Posted by မိုးနင်း at 10:06 PM0comments
ထမနဲလို မွှေတဲ့ မိန်းမအတွက်
အစိမ်းရောင် ပန်းတစ်ခက် ယူသွား
Posted by မိုးနင်း at 8:39 PM0comments
အမျိုးသား တစ်ယောက်သည် စာအုပ်ဝယ်ရန်အတွက် စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲသို့ ၀င်သွားသည်။ အတော်ကြာကြာ ရှာဖွေသော်လည်း သူလိုချင်သော စာအုပ်ကို မတွေ့ရချေ။ ထို့နောက် ကောင်တာမှ စာရေးမလေးအား မေးကြည့်လေသည်။
''ဒီမယ်..ခင်ဗျ.. မိန်းမနိုင်နည်း စာအုပ်ကာ ဘယ်အတန်းမှာလည်း မသိဘူး ခင်ဗျ..။''
ထိုအခါစားရေးမလေးကာ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြန်ပြောသည်။
" စိတ်ကူးယဉ် စာပေတန်းက ဟိုဖက်မှာရှင့်..။''
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် လမ်းမှာတွေ့ကြသည်။ တစ်ယောက်က မေးသည်။
''ဟေ့..မင်းတို့ လင်မယားနှစ်ယောက် မနေ့က ရန်ဖြစ်ကြတယ်ဆို..။"
"ကုတင် အောက်က ထွက်ခဲ့စမ်း..တဲ့"
တစ်ခါက ရုရှားဗိုလ်ချုပ်ကြီးသည် သူ့၏စစ်သားများအား မိန့်ခွန်းပြောသည်။
"ရဲဘော်တို့ အမေရိကန်တွေကတော့ လကမ္ဘာကို သွားကြပြီ.. တို့လည်း အားကျမခံ မင်းတို့ကို နေကမ္ဘာပေါ် လွှတ်မယ်..။"
"ဟာ... ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကလည်း အားလုံးပူပြီး သေကုန်မှာပေါ့...။ "
စစ်သားတစ်ယောက်က ထပြောသည်။ထိုအခါ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက ဒေါသတကြီးဖြင့် ပြန်ပြောလေသည်။
"ငတုံးတွေရဲ့ မင်းတို့ကို ညကျမှ လွှတ်မှပေါ့.."
ရဲစခန်းသို့ အရေးပေါ်ဖုန်းတစ်လုံးဝင်လာသည်။ စခန်းမှုးက ကိုင်လိုက်သည်။
"ကျွန်တော်အသက် အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရလို့ပါ.."
"ကျွန်တော့် အခန်းထဲကို ကြောင်တစ်ကောင်ဝင်လာလို့ပါ..။"
တရားရုံးတစ်ခုတွင် အမှုတစ်ခု စစ်နေလေသည်။
ပြည့်တန်ဆာများအား ဖမ်းဆီးကာ စစ်ဆေးသောအမှုဖြစ်သည်။
တရားသူကြီးက တရားခံမိန်းမအား စစ်ဆေးနေသည်။
ထိုအခါ တရားခံမိန်းမက ပြုံးစိစိဖြင့် ပြန်ပြောလေသည်။
Posted by မိုးနင်း at 6:13 PM0comments
သင်ရဲ. နာမည် မှာပါတဲ. ABCD အက္ခရာ လေးတွေကနေ သင့်ရဲ့ စရိုက် ကို ခန်.မှန်းနိုင်ပါတယ်။ မဆိုးဘူးနော်။ မှန်မမှန်သိချင်ရင် စမ်းလုပ်ကြည့်လိုက်လေ။ ကျွန်တော် တော့ စမ်းပြီးသွားလို့ မှန်တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ လုပ်နည်းက ဒီလို .......
ဥပမာ . သင့်နာမည်က Lin Lin ဆိုပါတော့ .. ဒါဆို
L = သင်ဟာ အချစ်ကို ကိုးကွယ်သူ
I = သင်.ဟာ အမြဲ တမ်း ပြုံးနေပြီး တပါးသူကိုလဲ ပျော်ရွင်စေတယ်
N = သင်ဟာ အလုပ်မရှိရင် မနေတက်သူ ဒါပေမယ်. ရှိရင်လဲ ငြီးငြူတက်သူ
ဒါဆို သဘောပေါက်ပြီနော်။ ကဲ အခု အောက်က ဖော်ပြထား တဲ့ A ကနေ Z ထဲက သာရှာကြည်.
A = သင်ဟာ အင်မတန် အေးတဲ.သူဖြစ်သော်လည်း သင်.စိတ်ထဲမှာ အကြံ တခုခုရှိတယ်
B = သင်ဟာ သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ. ဆက်ဆံရတိုင်း အမြဲ သတိရှိတယ်
C = သင်.မှာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် စိတ်ဓါတ်အပြည်.ရှိတယ်
D = သင်.ဟာ လူတယောက် ကို ယုံကြည်ဖို. အင်မတန် ခက်ခဲတယ်
E = သင်ဟာ အင်မတန် စိတ်ဝင်စား စရာ ကောင်းတဲ့သူပဲ
F = သင့်မှာ ချစ်မွေး ပါတယ်
G = သင့်ဟာ လူတွေ ကို အကဲခတ်အရမ်းတော်တယ်
H = သင့်မှာ ဆင်ခြင်တုံ တရား မရှိဘူး
I = သင်ဟာ အမြဲ တမ်း ပြုံးနေပြီး သူတပါးကိုလဲ ပျော်ရွင်စေတယ်
J = သင်မှာ မနာလိုမရှုစိတ် ရှိတယ်
K = သင်မှာ စူးစမ်း စမ်းသပ် လိုစိတ် ရှိတယ်
M = အောင်မြင်မူ တွေကို သင်အလွယ်တကူရတယ်
N = သင်ဟာ အလုပ်မရှိရင် မနေတက်သူ ဒါပေမယ့် ရှိရင်လဲ ငြီးငြူတက်သူ
O = သင်ဟာ အင်မတန် ပွင့်လင်း တဲ့သူ
P = သင်ဟာ အင်မတန် ရည်မွန် ပြီး နားလည်မူ အပြည့်ရှိတယ်
Q = သင် ဟာ သူတော်ကောင်း ယောင်ဆောင်ထားတယ်
R = သင်ဟာ လူမူရေး ကိစ္စ္စ္စ တွေမှာ မပါမဖြစ်
S = သင်ဟာ သဘောထား ကြီးတယ်
T = သင့်မှာ ကြီးမားတဲ့ ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်
U = သင်.ကိုယ်သင် အားလုံး နဲ. ရင်ဘောင်တန်း နိုင်တယ်လို့ မှတ်ယူထားတယ်
V = သင်.ကိုယ်သင် အရမ်းချောတယ် ထင်ထားတယ်
W = သင်ဟာ သင့်အကြောင်းတွေကို သူများ ကို မပြောပြချင်ဘူး
X = သင်ဟာ သူများ လမ်းပြ၊ ဆရာလုပ်တာမကြိုက်ဘူး
Y = သင့်မှာ အခက်အခဲတွေ များကြီး ရှိတယ်၊ ရှိခဲ့တယ်
Z = သင်ဟာ အမြဲ တမ်း တယောက်ယောက်နဲ့ ရန်ဖြစ်နေရမှ ကျေနပ်တယ်။
ကဲ ဘယ်လိုလဲ ? တိုက်ဆိုင်မှုရှိမရှိ ကိုယ်ကိုတိုင်ဘဲ သိမှာပေါ့။ အားလုံး ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်..
Posted by မိုးနင်း at 3:05 PM0comments
ကောင်လေးက ကလေးသာသာအရွယ်လေး.. အလွန်ဆုံးရှိမှ ဆယ်နှစ်၊ ဆယ်နှစ်နှစ်ပဲ ရှိဦးမည်။ လူကြီးတွေ ကြားထဲမှာ သူက ကြပ်ညှပ်လျက်။ လူက ပိန်ပိန်၊ အသားက နေလောင်ခံ ညိုညစ်ညစ်။ ဆံပင်လေးက ကျဲတဲတဲနှင့် သေးသေးကလေး ဖြစ်နေသည်။ တစ်ပတ်တစ်ခါ သမ၀ါယမမှ ဆီပေးသည့်အခါ လာတိုးကြသည် သူတွေက အများသာဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီအထဲမှာ ဆိုဒ်စုံ၊ ဂိုက်စုံ။ ဒါပေမယ့် သူ့လိုပုံစံမျိုးတော့ တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူး။ မနက် (7) နာရီလောက် ကတည်းက ဆီစပေးကာ (8)နာရီလောက်ကျတော့ လူအတော်ပါးလာပြီ။ ကောင်လေးက ကလေးဆိုတော့ လူကြီးတွေက ကျော်တက်လိုက်၊ သူ့ထက် အကောင်ကြီးတဲ့သူတွေက အနောက်ပို့လိုက်နဲ့ အရှေ့ကို မရောက်နိုင် လုံးချာလည် လိုက်နေသည်။ ကြာတော့ သူ့ကို သနားလာတာနဲ့ လှမ်းခေါ်ရတော့သည်။
“ဟေ့.. ဟိုကလေး ဒီကိုလာဦးကွဲ့..”
ကျွန်တော်လှမ်းခေါ်တော့ ကောင်လေးက ၀မ်းသာအားရပြေးလာသည်။ ဖိနပ်တောင်မပါရှာ။ အကျီ င်္ကလည်း စွပ်ကျယ် အပေါက်ကလေးနှင့် သနားစရာကလေးဖြစ်နေသည်။
“မင်း ဆီ လာတိုးတာလား”
“ဟုတ်ကဲ့.. ဦး” ကောင်လေးက ရိုရိုသေသေလေး ပြန်ဖြေသည်။ ယဉ်ကျေးပုံရသည်။ ဆီ မြန်မြန်လိုချင်လို့ ဖြေတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
“ဟုတ်ကဲ့..ဒီမှာပါ” ပလတ်စတစ်လောင်းထားသော သန်းခေါင်စာရင်းလေးကို ထုတ်ပြသည်။
“မင်းအိမ်မှာ လူကြီးတွေ မရှိဘူးလားကွ”
“ရှိပါတယ်..။အရင်က အမေတိုးနေကြပါ။ အခုအမေက နေမကောင်းဖြစ်နေလို့ သားလာတိုးတာပါ”
သူ့ဟန်ပန်က ပုံစံနှင့်မလိုက်အောင် ယဉ်ကျေးသဖြင့် မမေးသင့်သော မေးခွန်းကို ကျွန်တော်မေးလိုက်မိသည်။ မတော်တဆ သူဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာလည်း စိုးရိမ်မိသေးသည်။
“သုံးတန်းပါ..” သူက ပြောပြီး သူ့ရဲ့ ပြူတစ်ပြူတစ် နှပ်ချီးကို ဗြစ်ခနဲညှစ်ပြီး သူ့လက်ခုံလေးနှင့် သုတ်နေသေးသည်။
“မမှီရင်တော့ သွားမတက်ဘူးပေါ့ ..ဦးရာ”သူက လူကြီးဟန်လေးနဲ့ ပြောပြန်သည်။
“မင်းအမေက ကျောင်းမတက်ခိုင်းဘဲ ဆီလာတိုးခိုင်းတာလား”ကျွန်တော့်ကို တစ်ချက်မော့ကြည့်သည်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဒီလူကြီးက တော်တော်လျှာရှည်တာပဲဟုလည်း ထင်ကောင်းထင်သွားနိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် သူပြန်ဖြေပါသည်။
“မဟုတ်ပါဘူး.. အမေကကျောင်းသွားခိုင်းပါတယ်..သားက အမေမသိအောင် လာတိုးတာ..ဒီက ဆီရလို့ သွားရောင်းပြီးရင် ကျောင်းသွားတက်မှာ..” ကျွန်တော်အံ့သြသွားသည်။ သမ၀ါယမက ပေးသောဆီသည် ဘယ်လောက်မှ မရှိ။ တစ်ဆယ်သား ၊နှစ်ဆယ်သားကို သူဘယ်လိုရောင်းမလဲဟု စိတ်ဝင်စားသွားသည်။
“ဘာဖြစ်လို့လဲကွ.. ဒီက ဆီက ဘယ်လောက်ရမှာမို့လို့လဲ”
“ဒီက ဆီတိုးပြီးလို့ လမ်းထိပ်က ဆိုင်မှာသွားရောင်းရင် ၉၀ လောက်ရတယ်လေ.. အဲ့ဒါဆို ဆန်ဝယ်လို့ရပြီ.. အမေက နေမကောင်းတော့ အ၀တ်တွေ မလျှော်နိုင်ဘူး.. ပိုက်ဆံကလည်း မရှိဘူးလေ”
ကျွန်တော်ရင်ထဲ တော်တော် နင့်သွားသည်။ ပိုက်ဆံ 90 ဆယ်သည် ဆန်နှစ်လုံး၊ သုံးလုံးအပြင်ပိုမရ။ တစ်နပ်စာတောင် မရှိ။ သူတို့ ဘယ်လိုစားမှာပါလိမ့်ဟု စဉ်းစားမိသည်။
“ မင်းတို့မောင်နှမ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ”
“သားတို့ မောင်နှမ လေးယောက်ရှိတယ်.. သားကအကြီးဆုံး” ဆုံးဆိုသော နေရာမှာ သူ့အသံကလေးက နည်းနည်းဆောင့်သွားသည်။ ကောင်လေး စိတ်မရှည်တော့ဘူးဟု ကျွန်တော်သိလိုက်သည်။ ဒါနဲ့ပဲ တခြား မေးချင်တာများကို အောင့်အည်းကာ ဆီမြန်မြန်ထည့်ကာ ပေးလိုက်သည်။ ဆီရတော့ သူ့မျက်နှာကလေးက ပြုံးရွှင်လို့။ ကျွန်တော်ကိုလည်း ကျေးဇူးပဲဟု ပြောသွားသေးသည်။ သူသွားတော့ ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ တစ်ခုခုကို မကျေမနပ်ဖြစ်မိသည်။ ကောင်လေးကိုပဲ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့်တော်လိုက်တာဟုပဲ ချီးမွမ်းရမလား။ သူ့ရဲ့ ကံကြမ္မာကြီးကိုပဲ ယိုးမယ်ဖွဲ့ရမလား။ သူ့မိသားစု အသိုင်းဝိုင်းကိုပဲ အပြစ်တင်မရမလား။ ဘာကို ပြောလို့ပြောရမှန်းပင်မသိတော့။ ဒီလောက်အရွယ်လေးနှင့် ဒီလို သိတတ်တဲ့ ကလေး အတော်ရှားသည်ဟု ဆိုရမည်။ သို့ပေမယ့် သူပြောသွားတာတွေကိုလည်း အမှန်တွေပဲဟုလည်း ယူဆ၍ မရ။ သူမုန့်ဖိုး လိုချင်လို့ လာပြီး ခိုး တိုးတာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ တခြားကိစ္စ အများပြားလည်း ရှိနေနိုင်သည်။ သို့သော် ဒီဟာသာ တကယ့်အဖြစ်ဆိုရင်တော့ ဒီကောင်လေးကို ကျွန်တော်ချီးကျူးသည်ဟု ဆိုချင်ပါသည်။ ဘာကြောင့်ဆို ကျွန်တော်တို့သည် သူ့လောက် မိဘအပေါ်သိတတ်မှုမရှိသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Posted by မိုးနင်း at 10:16 PM2comments
မင်းကငါ့ကို အိပ်မက်အကြီးစားတစ်ခုနဲ့ ထားပစ်ခဲ့တယ်
တို့နှစ်ယောက်ကံကုန်အောင် မင်းတယုတယ ထိုင်ခြွေခဲ့တယ်
အကြီးစား ငတုံးတစ်ကောင် ကျန်ခဲ့ရပေါ့ကွယ်
အံဝင်ခွင်ကျ မှားပြရင်း အလွဲတွေနဲ့အသားကျခဲ့ရ
သမီးရဲ့ အသံလေးလောက် မသာယာဘူး
ရေဆာသူ ရေငတ်သလိုကို လွမ်းတယ်
သမီးလေးရဲ့ မွှေးပွခွေးရုပ်လေးရယ်ပဲ ရှိခဲ့တာပါကွာ
Posted by မိုးနင်း at 5:58 PM2comments
Posted by မိုးနင်း at 1:22 AM3comments
တိုင်းပြည်ရာဇ၀င် ၀င်ရေးကြတဲ့ အမည်မသိသူရဲကောင်းတွေ
တချို့က ငိုကြ၊ တချို့ကလည်း ရယ်ကြ
Posted by မိုးနင်း at 9:30 PM3comments
တစ်ခါက လူတစ်ယောက်ဟာ သေလွန်ပြီးနောက် ကောင်းကင်ဘုံကို ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ထို့နောက်ဘုရား သခင်နဲ့တွေ့ပြီး သူ့အပြစ်တွေကို ၀န်ခံပါတယ်။
လူသား။ ။ဘုရားသခင် ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ထံမှာ ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေကို ၀န်ခံချင်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်။ ။ရပါတယ် ချစ်သား။ ချစ်သားရဲ့အပြစ်တွေကို ၀န်ခံလို့ရပါတယ်။
လူသား။ ။ကျွန်တော်လူ့ဘ၀တုန်းက အပြစ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့မိပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြစ်တွေကို ဘုရားသခင် ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်။ ။ခွင့်လွှတ်ပေးပါမယ် ချစ်သား။ပြောပါ။
လူသား။ ။ကျွန်တော်လူ့ဘ၀မှာတုန်းက အိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ တစ်နေ့မှာကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မရီးဆီကို သွားရပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့က သူတစ်ယောက်တည်းရှိပါတယ်။ ကိစ္စပြီးလို့ ပြန်ခါနီးမှာ မိုးတွေက အရမ်းကိုရွာပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ထီးလည်း မပါခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ မိုးတိတ်အောင်စောင့်ရင်း ကျွန်တော့်မရီးနဲ့ မှောက်မှားခဲ့မိပါတယ်။
ဘုရားသခင်။ ။ ရပါတယ် ချစ်သား။လူဆိုတာ တကြိမ်တစ်ခါတော့ မှားယွင်းတတ်ကြပါတယ်။
လူသား။ ။မပြီးသေးပါဘူး။ နောက်တစ်နေ့ကျတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ အိမ်ကိုသွားပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့က သူငယ်ချင်းက မရှိပါဘူး။ သူ့ညီမလေး တစ်ယောက်တည်းပဲ ရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းမရှိလို့ ပြန်မယ်လုပ်တုန်း မိုးတွေက အရမ်းရွာလာပါတယ်။ ကျွန်တော့်မှာ ထီးကလည်း မပါပြန်ပါဘူး။ အဲ့ဒါ မိုးတိတ်အောင်စောင့်ရင်း သူငယ်ချင်းရဲ့ ညီမလေးနဲ့ မှောက်မှားခဲ့မိပါတယ်။
ဘုရားသခင်။ ။ ရပါတယ် ချစ်သား။ ဘ၀မှာလူတွေဟာ ခဏခဏမှားတတ်ကြပါတယ်။
လူသား။ ။မပြီးသေးပါဘူး။ နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော့်အဒေါ်အိမ်ကို သွားပါတယ်။ အဲ့ဒီနေ့က အဒေါ်က အလုပ်ကိစ္စနဲ့ အပြင်ကိုသွားပါတယ်။ အိမ်မှာ သူမွေးစားထားတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်။ ပြန်ခါနီးမှာ မိုးကရွာလာပြန်ပါတယ်။ထီးကလည်း မပါပြန်ပါဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ မိုးတိတ်အောင်စောင့်ရင်း အဒေါ့်ရဲ့ မွေးစားသမီးလေးနဲ့ မှောက်မှားခဲ့မိပါတယ်။
ဘုရားသခင်။ ။ရပါတယ် ချစ်သား။ လူတွေဟာ တစ်ခါတလေမှာ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
လူသား။ ။မပြီးသေးပါဘူး။ နောက်တစ်ခါ ကျွန်တော့်ဘကြီးအိမ်ကို သွားရပါတယ်။ ဘကြီးက မရှိပါဘူး။ သူ့အိမ်မှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်။ အဲ့ကောင်လေးကလည်း နွဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ အခြောက်ကလေးပါ။ ဘကြီးမရှိလို့ ပြန်မယ်လုပ်တော့ မိုးကရွာပြန်ပါတယ်။ ထီးကလည်း မပါပြန်ပါဘူး။ အဲ့ဒါ မိုးတိတ်အောင်စောင့်ရင်း အဲ့ကောင်လေးနဲ့ လည်း မှောက်မှားခဲ့မိပါတယ်။
ဘုရားသခင်။ ။ရပါတယ်ချစ်သား။ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ့မယ်။
အဲ့အချိန် ကောင်းကင်ဘုံမှာ တိမ်တွေမည်းပြီးညို့လာတယ်။ ခဏကြာတော့ မိုးစက်ကလေးဖွဲဖွဲနဲ့ ကျလာတယ်။ သိပ်မကြာခင်ပဲ မိုးတွေရွာလာပါတော့တယ်။ အဲ့ဒီအခါ ဘုရားသခင်က လူသားကို အလန့်တကြားထအော်တယ်။
“ဟေ့မင်းငါ့ဆီ လာတာရော ထီးပါခဲ့ရဲ့လား”
Posted by မိုးနင်း at 5:14 PM0comments
Posted by မိုးနင်း at 9:33 PM 1 comments
ကျွန်တော့်တို့က အဖေ့ကို လက်ပြ
အဖေ့က ကျွန်တော်တို့ကို လက်ပြ
ဘောပွဲတစ်ပွဲလို ပါပဲ အဖေရယ်
အနိုင်ရဖို့ ရုန်းကန် ကြိုးစားရင်း
ရာနူန်းပြည့်တောင် မရေရာ မသေချာပါဘူး အဖေ
တကယ့်ကို လွမ်းမောစရာကြီးပါ အဖေရာ
Posted by မိုးနင်း at 7:11 PM0comments